Shareecada Islaamka iyo Doorashada Madaxda Sh. Xasan JaamiciWednesday, August 29, 2012
Waxaa jira welwel ay qabaan Soomaalida inteeda badan oo ku saabsan waxa ay hasha maandeeq (Soomaaliya) ay dhali doonto maalmaha soo socdo. In kastoo xanuunka foosha uu ka sii darayo haddan dib u dhac ayaa ku dhacay waqtiga la filayay in ay Maandeeq dhasho August 20keed, 2012, saqda dhexe habeenkii. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Waxaa muran ka taagan ciddii dhalin lahayd Maandeeq. Waxaa jira warar sheegaya inay maalinta ay ahayd in ay Maandeeq dhasho August 20keeda, 2012 ayaa waxaa dhimatay umulasadii dhalin lahayd maandeeq. Waxaa kaloo dood ka taagan ilmaha dhalan doono cidii banaan bixin lahayd iyo cidii magac u bixin lahayd iyo magacii loo bixin lahaa. 5 magac ayaa layksu heystaa; 1.DOWLAD 2. DANEYSTE 3. HANAD 4. DALJIR 5. SHANKAROON (waa haddii ay gabar noqoto). Ilaahey hana siiyo dowlad kheyr badan oo na wada deeqda oo na daryeesha. Aamiin
Su'aasha maalmahan laysla dhexmaraya waxay tahay in kastoo doorasho xor iyo caddaalad aanan la filaynin sanadahan dhow haddana xikmad ayaa waxay dhahdaa waxaan la wada haleynin lagama wada tago. Wixii wanaagsan ee la heystaa lagu dhegaa. Su'aasha waxay tahay waa maxay tilmaamaha qof lagu xulan karo oo ay shareecadu fartay oo ay xildhibaanada ku dooran karaan madaxda dalka. Maxaa halbeeg ah oo lagu cabiraa qofka mas'uulka inuu xil qaadi karo iyo in kale. Shareecada Islaamka laba shardi oo aasaasi ah ayey u sameysay ruuxa mas'uul noqonayaa sida ku cad suuratu Yusuf:
1) Cilmi (knowledge) oo loola jeedo khibrad, xilkasnim, xikmad, fahmad badan, indha badan iyo waaya aragnimo. Waxaa meesha ka baxayaa: · Jaahil
· dhoohane iyo mid kastoo wax kala garaneynin · meel dhow wax ka fiirshe
· Talo diid iyo ma tashada
2) Aaminnimo (Honesty) waxaa meesha ka baxaya: · khaa'in
· tuug · dab dhalif · gumeysi kal kaal · cadaw kal kaal · jaajuus · qabiiliste (reerkiisa wax walba la rabo oon u kala soocneyn danta qabiilkiisa iyo tan qaranka)
· munaafiq wajiyo badan.
Haddii labadda sifo la helo qofka waa loo dooran karaa in uu madax noqdo iyadoo shardi ahayn inuu xisbi ama urur ama qabiil gooni ah uu ka soo jeedo. Waxaa hubaal ah haddii Soomaalida ay sidaa wax ku xulato ama ku doorato in uu Ilaahey barakeynayo doorashada iyo madaxda la doortay ka dibna ay horseedi doonaan nabada, xoriyad, cadaalad, horumar iyo midnimo. Halbeega shareecada ma ahan yuu u dhashay ee waa CILMI IYO AMAANO MA LEEYAHAY.